CPE တွင် Top Up Card (ငွေဖြည့်ကဒ်) အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်
1. Computer နှင့် CPE Wi Fi အား Wireless ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
2. Internet Explorer (IE) (သို့မဟုတ်) Mozilla Firefox Browser ကိုဖွင့်ပါ။
3. Address bar တွင် http://172.31.0.119 or http://192.168.2.119 ကိုရိုက်ထည့်၍ enter နှိပ်ပါ။
4. Customer Service System Web Page ပေါ်လာပါက Name နေရာတွင် မိမိ CPE & Phone Number (eg .. 010-xxxxxxx) ကိုထည့်ပေးပါ ..
5. Password နေရာတွင် မိမိ McWiLL UID Card မှ UID Number (eg .. 166xxxxxxx) ကို Calculator အသုံးပြုပြီး decimal မှ Hex သို့ပြောင်းလဲပေးပါ ... ပြောင်းလဲ ပြီးစီးသော Hex နံပါတ်ကို password နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပြီး login ပြုလုပ်ပါ ..
6. My Information ကို Click ပြုလုပ်ပြီး မိမိ ဖုန်း (သို့) CPE တွင် Bill လက်ကျန် ကိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်
7. Bill Query ကို Click နှိပ်ပြီး မိမိ Call Detail List ကြည့်ရှုလိုသော လကို ရွေးပြီး Query ကို Click နှိပ်ပြီး Call Detail List ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ..
8. Modify Password ကို Click နှိပ်၍ မိမိ Account Password ကို မိမိနှစ်သက်ရာ Password သို့ပြောင်းလဲနိူင်ပါသည်။ Password နှင့် Confirmation နေရာတွင် မိမိနှစ်သက်ရာ Password ပေးပါ။ Password နှင့် Confirmation မှာတူညီရပါမည် ...
9. Recharge ကို Click နှိပ်ပြီး Number နေရာတွင် CPE ၏ Phone Number ကို ထည့်ပေးပါ .. Confirmation နေရာတွင်လည်း CPE ၏ Phone Number ကို ထည့်ပေးပါ .. Card Password နေရာတွင် Top Up Card (ငွေဖြည့်ကဒ်) မှ PIN No: (ခဲဖြစ် နံပါတ်) ကို ထည့်ပြီး Ok ကို Click ပြုလုပ်ပါ .. ပြီးလျှင် ငွေဖြည့်ခြင်း ပြီးစီးပါက Logout ပြုလုပ်ပြီး Account မှ ပြန်လည်ထွက်နိုင်ပါသည် ..